Oovimba base-UK bagcina
Udidi: Izitokhwe zase-UK
IDollar ibuya ngokunyuka kweZivuno zaseMelika, ukuwa kwegolide njengeZew yaseJamani inyusa iYuro
Idola liyabuyela umva namhlanje, likhuthazwa kukwanda kwezivuno zase-US. Ngaphandle koko, idola ikwagcina yomelele kunamanani alindelweyo okuvelisa. Ngelixa izitokhwe zaseYurophu zikwisixinxi, ikamva lase-US livulwe ngaphezulu. I-yen ngoku yeyona imbi kakhulu, ilandelwa yi-Australia kunye ne-Canada. Ngokubanzi, kuhlala kubonakala ukuba idola liya kuba nakho ukumelana nokubuyela umva.
Ngokubanzi, utshintsho lweemarike alukatshintshi, njengoko umngcipheko omkhulu wokutya uhlala uhleli. Namhlanje kugxilwe ekubeni ingaba uqoqosho lwe-ZEW eJamani kunye ne-GDP ye-eurozone inokuphakamisa i-euro. Ngaphandle koko, imeko yangoku kufuneka iqhubeke kungekudala. Ngeli xesha, kwawa igolide, kodwa ke ngokomthetho ukuwa kwegolide kuyahambelana nokubuyela kwi-dollar.
Isalathiso semeko yezoqoqosho yaseJamani ye-ZEW inyuke yaya kwi-71.2 ngoFebruwari ukusuka kwi-61.8, ngaphezulu ngaphezulu kwe-60.0 yokulindela. Isalathiso semeko yangoku siwele ku -67.2 ukusuka -66.4, ukugqitha kulindelo -67.0. I-Eurozone ZEW Economist Sentiment Index inyuke yaya kwi-69.9 ukusuka kwi-58.3, ngaphezulu kokulindelweyo kwe-59.2. Inkcazo yemeko yangoku inyuke ngamanqaku ama-4.3 aya kuma-74.6.
Iingcali zentengiso yezemali zinethemba ngekamva. Baqinisekile ukuba uqoqosho lwaseJamani luza kubuyela kwinqanaba lokukhula kwezi nyanga zintandathu zizayo. Ngokukodwa, ukusetyenziswa kunye nentengiso yeentengiso kulindeleke ukuba inyuke kakhulu, eza kuhamba kunye nolindelo lwamaxabiso aphezulu, utshilo uMongameli we-ZEW u-Achim Wambach.
Igolide ilungisa ukuPhakama ekunyukeni kweziVuno zaseMelika
Ngegolide, naziphi na iingeniso ezivela kumngcipheko wobume ngokubanzi zacinywa zizivuno eziphezulu zase-US. Isikhundla sobuchwephesha begolide sihlala siethe-ethe kwaye siza kungena koxinzelelo lwe-bearish kule veki ukuba izivuno zase-US ziyaqhubeka nokukhula.
Igolide iye yehla kwiveki enesiqingatha isezantsi kwangoko kwiseshoni yaseNyakatho Melika, kwaye iibhere ngoku zifuna ikhefu elizinzileyo elingaphantsi kwenqaku leedola ezili-1800.
Isinyithi esixabisekileyo sizabalaze ukwenza imali kwi-intraday entle yokuhamba, kodwa endaweni yoko yahlangana nokubonelelwa okutsha kwingingqi ye- $ 1826-27 kwaye ngoku ibonakala isesichengeni sokuqhubeka nokuhla. Imeko yomngcipheko ekhoyo, njengoko kungqinwa kukuqhubekeka kweenzuzo zakutshanje zeemarike zezabelo, zibambe umhlangano kwangethuba kwindawo ekhuselekileyo yeXAU / USD.
tags Euro, KwiDola yaseMelika, Izitokhwe zaseMelika
Iponti ye-Sterling Surges e-UK ivelisa njengoko i-Dollar's Selloff iqhubeka
Idola lihlala libuthathaka kurhwebo lwanamhlanje, nangona uvakalelo ngokubanzi luzinzile. Ukurhweba ngomngcipheko kuthatha ukuphefumla ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile emva kokuba izitokhwe zaseMelika zangaphambili zibethe iinzuzo ezintsha zangaphakathi.
Okwangoku, ukuthengiswa kwedola kuyaqhubeka ekuqaleni kweseshoni yaseMelika kwaye kuyaqhubeka emva kwamaxabiso abuthathaka kunalindelweyo kwi-CPI engundoqo. Iindibano zeSterling namhlanje phakathi kokunyuka kwesivuno sase-UK, kunye nemveliso yeminyaka eli-10 ngoku ehlasela i-0.494. Inokuzama ukwaphula ubhubhane wangaphambi kwesibetho malunga ne-0.50%. Iimarike zotshintshiselwano lwangaphandle kwamanye amazwe azifani, zinokomelela okomeleleyo kwi-franc yaseSwitzerland kodwa hayi kwi-yen. Iimali zezinto zorhwebo kunye ne-euro zizinzile, kodwa okwangoku akukho kuthengwa okungxamisekileyo kokulandela.
Idola liqhubekile nokwehla kwalo njengoko iimarike zihlala zinamandla amakhulu, zilindele iindaba ezikhuthazayo kunye nokwamkela amathemba okugonywa. Idatha yokwenyuka kwamaxabiso e-US kunye nentetho kaSihlalo we-Federal Reserve System uJerome Powell kulindeleke. Isivuno seminyaka eli-10 yoNondyebo wase-US sizinze kwi-1.15% emva kokunyuka kokuqala. Ukulahla okwangoku kwimarike yebhondi kuthathelwe indawo yimeko yokuthatha umngcipheko.
Iphawundi eSterling iya kwiPhakamileyo ePhakamileyo
Iponti yaseBritani iyaqhubeka ukunyuka, ngexabiso lenyuka laya kwinqanaba elitsha kwiminyaka emithathu enesiqingatha. Inzuzo yenzeka xa i-GBPUSD isondela kwinqanaba le-1.3866. Isikiti siphinda siphumelele iintliziyo neengqondo zabatyali zimali njengoko impumelelo yase-UK ekusasazeni iyeza lokugonya le-coronavirus liphucula amathuba okubuyiselwa kwezoqoqosho.
Esi sibini sesinye sezona zinengeniso ze-G10 / USD zolu suku njengoko izinto ezisisiseko ezisisiseko sepondo zihlala zilungile. Okwangoku, idola yaseMelika ixutywe xa kuthelekiswa noontanga bayo be-G10, kwaye idatha ethambileyo yokunyuka kwamaxabiso wabathengi ngoJanuwari ayincedi. Esi sibini sithengisa ngoku malunga neepesenti ze-0.2 okanye i-30 pips ngosuku.
Iimarike zihlala zinethemba malunga nethemba lesicwangciso esikhulu senkcitho kuhlahlo-lwabiwo mali lwaseMelika. Oku kuza phakathi kwenkqubela phambili ekukhutshweni kwezitofu zesifo esosulelayo se-coronavirus kwaye kubangela ulindelo lokuvuselelwa koqoqosho olomeleleyo ngelixa kugcinwa imeko yomngcipheko ekhoyo.
tags Pound Sterling, KwiDola yaseMelika
Idola ilinde i-US Stocks, isivuno njengePound Sterling Rebound kwi-Lows yemihla ngemihla
Idola yaseMelika iyachacha njengoko umngcipheko wokutya uphola kancinci kwiseshoni yaseMelika. Nangona kunjalo, ikamva lesitokhwe sase-US lisiya kwinqanaba eliphezulu lamaxesha onke, ngelixa izivuno zihlala zizinzile. Ndijonge phambili ekuboneni idola liqhubeka nokuhamba kwakhona kungekudala. Idola yaseCanada okwangoku yimali yorhwebo eqinileyo, ephenjelelwa ngamaxabiso eoyile. I-sterling igxotha yonke imihla ngokuchasene nedola.
I-GBP / i-USD yenyuka ngaphezulu emva kokuqala kweseshoni yaseMelika kwaye yenyuka yaya kwi-1.3749, ibetha elona nqanaba liphezulu kwiveki. Ihlala kufutshane nokuphakama ngasemva kwedola yaseMelika ebuthathaka kwibhodi yonke.
Isalathiso sedola yaseMelika siphinde savela ngokuwa kwangoLwesihlanu kwaye sabuyela umva saya kwi-90.89, iintsuku ezintandathu ezisezantsi. Ngexesha leseshoni yaseMelika, umngcipheko wokutya kunye nokuncipha kwesivuno se-US kwanciphisa idola.
Umphathiswa wase-Bhritane u-Michael Gove uthe ngoMvulo kukho inkxalabo eMntla Ireland malunga ne-Northern Ireland Protocol kwaye wongeze ukuba kufuneka iphuculwe ukuqinisekisa ukusebenza kwayo. Isibini se-GBP / USD asibonisanga mpendulo kwangoko kwezi zimvo kwaye kutsha nje sifumene i-0.05% ngosuku ukuya kwi-1.3740.
Idola ilindele ii-US Stocks kunye nezivuno
Izitokhwe zehlabathi zenze isiqalo esomeleleyo ngoFebruwari emva kokugungqiswa kukunganyaniseki kokuthengisa emini ekupheleni kukaJanuwari, nto leyo ibangele ukuba izitokhwe ezazingathandwa ngaphambili ezinje ngeGameStop zikhuphuke.
Idatha ekhutshwe kwiveki ephelileyo icebisa ukuba uqoqosho lwase-US lubuyele kwimeko yesiqhelo ngokukhawuleza kunokuba abahlalutyi bebeqikelele. Icandelo labucala leli lizwe longeze imisebenzi eyi-174,000 ngoJanuwari, idlula ingqikelelo ye-70,000, ngokwengxelo yenyanga ye-ADP. Idatha yophando ikwabonakalise ukuba icandelo leenkonzo libuye kakuhle.
Idatha ixhasa isivuno sebhondi, esonyukayo njengoko abatyali mali balindele ukukhula kunye nokunyuka kwamaxabiso. Isivuno seminyaka eli-10 yoNondyebo wase-US sisondela kwelona nqanaba liphezulu ukusukela nge-Matshi 2020. Isicwangciso sikaMongameli uJoe Biden sika- $ 1.9 trillion Isicwangciso sokukhuthaza saseMelika sikwomeleze ukuzithemba kweemarike kwezi veki zidlulileyo. Iidemokhrasi kwiCongress ziye zaqhubela phambili ngokuthatha amanyathelo okuphumeza iphakheji ngaphandle kwenkxaso yeRiphabhlikhi.
tags Pound Sterling, Izitokhwe zaseMelika, Izivuno zaseMelika
I-Footsie izama kwakhona ngeentsuku zokugqibela njengoko iinkunzi zeenkomo zingena kwintengiso
Ukuhlaziywa: 13 January 2021
I-footsie ibikwindibano enkulu ukusukela ekuqaleni kuka-Novemba 2020 ngaphandle kweziphene ezinzulu.
Ngoku singaphezulu kweedisemba zikaDisemba ze-2018 ezazingamanqanaba aphambili aphezulu kwaye ujonge ithuba elide.
Indawo yam yokwenene yokuthenga isezantsi ejikeleze i-6670 kodwa ukuba amaxabiso abambe la mazantsi ngaphakathi kwiflegi kwaye aphule kunye nolwakhiwo kwangoko amathuba okuqhubeka kwirali iphezulu.
Ukwahluka okuphezulu okufihliweyo kwe-bullish kufunyenwe.
Isabelo sikaHalfords sisibetho sokunyusa ukuqhubeka nokufumana ukuhamba okuluhlaza
Ukuba uthenge isitokhwe seHalfords (HFD) nge-Matshi 2020 nadir (51p), ke namhlanje (280p) uya kuhlala kwi-449%.
Imveliso ye-auto yase-UK kunye nomjikelezo kunye neqela leenkonzo ngaphandle kwamathandabuzo ngomnye wabaphumeleleyo bhubhane, kodwa abatyali-mali ngaphandle abajonge ngaphakathi banokuzibuza ukuba ingaba ikhona enye incindi ezakufakwa kule stock.
Impendulo nguewe. Impendulo yethu yozinzo ihleli ubuncinci kwingcinga yokuba ukutshintshela kubhayisikile ngexesha lobhubhane ayisiyiyo nje indlela edlulayo kodwa imeko eya kuthi inyanzeliswe njengenkxaso kurhulumente e-UK yokuhamba-hlukana nekhabhoni.
Ukusebenza kwayo kakuhle ngexesha lobhubhane ngokuqinisekileyo kuye kwancedwa kukuchongwa kwayo "njengomthengisi obalulekileyo" ngurhulumente, nto leyo ethetha ukuba ihlala ivulekile ngalo lonke ixesha lokuvalwa, nangona kungene ukungena okulawulweyo ekuhlaleni kudityaniswa nokucofa kunye nokuqokelela ukuhanjiswa kwemveliso.
Kwaye ayisiyiyo yonke into malunga neebhayisikile.
Olunye uhlobo lokudibana kukukhula kwintengiso yee-scooter zombane kunye nokuhamba okuncinci okufana nokuhamba ngamandla kagesi, njengokuhamba ngebhayisikile yombane, apho abakhweli banokubiza uncedo lwemoto xa, umzekelo, ukukhwela ibhayisikile.
IHalfords inokuqwalaselwa ngokufanelekileyo njengesitokhwe samandla ahlaziyekayo-okanye ubuncinci umdlalo ophathekayo wohlaza-njengoko isebenzisa ngempumelelo indawo yayo ekhokelayo kwintengiso yase-UK yeebhayisekile kunye neescooter, nokuba isathembele kwishishini le-injini yangaphakathi yomlilo.
Ukuhamba kwemali kwixabiso elingena simahla kuphantsi kakhulu kwi-2.2 kwaye amaxabiso okwabelana ngamaxabiso aphezulu, ngenqanaba leStopopedia lama-93 kwayi-100.
Ixabiso lentengiso-yokuthengisa nayo ibalasele kwi-0.47, esisiseko sexabiso layo elomeleleyo.
Umda osebenzayo (5.13%) kunye nokubuya kwinkunzi (8.6%) kubeka iiHalfords kwindawo yesithathu ephezulu kwicandelo lezentengiso labathengisi abakhethekileyo (abaneenkampani ezingama-37).
Kuhlaziyo lwayo lwentengiso lwango-Okthobha iiveki ezingama-26 ukuya nge-2 ka-Okthobha, inkampani iphakamise isikhokelo kwimbonakalo yayo yokuqala yesiqingatha semali, ngenzuzo yangaphambi kwerhafu ekulindeleke ukuba ingene kwi-55 yezigidi zeepawundi, uhlaziyo oluphezulu oluvela kwi-35-40 yezigidi zeepawundi ezichazwe ngaphambili. .
Ngokukodwa ukuthengiswa komjikelo kulindeleke ukuba kunyuke ngama-46% unyaka nonyaka kwiiveki ezintlanu ukuya kwi-25 kaSeptemba, eyayinoxanduva lokukhula kwenxalenye yokuthengisa ekhulayo ye-22%.
Iziphumo zethutyana ezixeliweyo phakathi ku-Novemba ziqinisekisile umbono wenkampani, ngeqela elipheleleyo njengemali engenayo eza nge-9.6% kunye nenzuzo yangaphambi kwerhafu ibetha isikhokelo esihlaziyiweyo ngentshebe kwi-56 yezigidi zeepawundi
Ukuthengisa kwi-Intanethi kwiHalfords kwi-148%
Ukuthengiswa kwe-Intanethi kukhule nge-148% kwaye ukukhula kweenkonzo zeqela bekuyi-166%. Oko, kudityaniswa nokuphucula ukoneliseka kwabathengi kunye nokukhutshwa koqeqesho kuzo zonke iivenkile kunye neenkonzo zokuhamba ngebhayisikile, kubonisa ukuba kuyaqhubeka nokutyala imali kwiindawo zokukhula ngobuchule.
Indawo enye yeshishini layo ethe yacothisa yi-Autocentres kunye nokuthengisa izinto ezincedisayo zokuhamba - zombini ezinxulumene ngokuthe ngqo nokuwa kwezithuthi ngexesha lokuvalelwa kwesi sifo. Kodwa nkqu nangezo zivunguvungu zomoya, inkampani ikwazile ukukhulisa ishishini kwicandelo leemoto.
Ngenene le nkampani iyaqhubeka nokutyala iimoto, kwaye ineliso kwikamva ngezicwangciso zokuqeqesha ezinye iingcali zemoto zombane ezingama-100 zizonke kulo nyaka (2021) wama-470.
Buyela kumjikelo, iiHalfords zonyusa ukubalwa kweentloko ze-ebike kunye neenkonzo zeescooter ukusuka kwi-400 ukuya ngaphezulu kwe-1,800. Injongo kukuqinisekisa ukuba iigaraji nganye zeenkonzo zeHalfords ziya kuba nobuchwephesha bobuchwephesha bemoto yombane kunye nevenkile nganye i-ebike kunye ne-escooter servicer.
Kwindlela elandelwayo yeenyanga ezilishumi elinambini ukukhula kwe-EPS ngama-67% kwi-P / E ephindaphindwe ngo-6.6 kunye nesahlulo semivuzo esi-2.18.
Ukutsala zonke ezo metriki kunye, iHalfords idibanisa zombini ithemba lokukhula kunye neempawu ezizodwa zexabiso, iyenza ukuba ibe ngumgqatswa kubacwangcisi be-GARP-ukukhula ngexabiso elifanelekileyo.
Ukuqinisekisa oko, iStopopedia inika iHalfords i-96 ngaphandle kweXabiso leXabiso. Ngokudibana namandla ayo aqinileyo, oko kuthetha ukuba ixabiso lesabelo linendawo eninzi yokuxabisa ngakumbi.
Uluhlu lwamaxabiso okungena 280p ukuya ku-264p
Isitokhwe besiphantsi izolo (ngoMvulo umhla we-11 kweyoMqungu) nangoLwesihlanu, kwaye siphantsi kwakhona namhlanje ekuqhubekeni kokuthatha inzuzo, okwangoku kunamaxabiso angama-280p. Nangona kunjalo, oku kungangqina indawo elungileyo yokungena kwexesha elifutshane kubatyali mali abatsha, nangona abathengisi banokufuna ukulinda ukuhla ngakumbi kwinkxaso kwi-264p (jonga itshathi engezantsi).
Umgca wendlela ongentla ukrwela inkxaso yexesha elikufutshane kwi-264, kwaye iqinisekisiwe ziintsuku ezingama-50 ze-SMA kwitshathi yamakhandlela yenyanga e-1 (ngezantsi). Ilifu le-Ichimoku libonisa ukunganyangeki ngaphambili kodwa silindele ukuba leyiswe, kunye neziphumo zokuphela konyaka-mali ekupheleni kuka-Matshi 2021 ukuqinisekisa ukuqhubeka kwezorhwebo (jonga itshathi engezantsi).
Ixabiso lezabelo zeHalfords lisekude ukusuka kwi-2019 ephezulu kwi-389, ungasathethi ke ngalo lonke ixesha eliphakamileyo eliprintwe ngo-2015 ngo-562 (jonga itshathi engezantsi).
Isitokhwe siyathenga ngekhalenda yokuphela konyaka yexabiso lama-389p.
tags abaxhasi, izibonelelo eziluhlaza, IiHalfords (HFD)